Laacibka Ștefan Radu oo tillaabo cajiib ah ku dhaqaaqay! – Gool FM
Laacibka Ștefan Radu oo tillaabo cajiib ah ku dhaqaaqay!
(Bucharest) 15 Feb 2018 – Daafaca kooxda Lazio ee Stefan Radu ayaa sida la soo sheegayo 1,000 tikit u qaybiyay taageeraal mucaarad ku ah kooxda ay kooxdiisu caawa la dheeleyso ee Steaua Bucharest – taasoo ah Dinamo Bucharest.
Kooxda Biancocelesti ayaa caawa Romania u joogta lugta hore ee wareegga 32-ka ee Europa League, taasoo la filayo inay soo xaadiraan taageerayaal gaaraya 40,000 gegada Arena Națională iyadoo sida uu qorayo Digisport ay halkaa sidoo kale joogi doonaan ilaa 1,000 taageere oo Lazio ah.
Sida uu webkani qabo, Radu ayaa ah ninka ka dambeeya inay kunkaasi Lazio u sacbiyaan, isagoo 1,000 kikit u qaybiyay taageerayaasha Dinamo oo ay aad u xafiiltamaan kuwa Steaua, iyadoo uu laacibkan dadabka bidix ka difaactama uu waayihiisa ciyaareed kooxda Câinii Roșii, kuwaasoo caawa kooxda Aquile sidaa ku taageeri doona.
Messi oo la hadlay Neymar iyo Alves kaddib guul daradii ay xalay kala kulmeen Real Madrid!!
TOOS u daawo: Borussia Dortmund vs Atalanta - LIVE (Shaxda sugan)